“Yurub Baan ka Gacan Haadiyaa Markaan Guurawee!”Qaybtii 3aad…Maxamed Siciid Gees, London, UK. | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	7:55 pm | Posted by kayse “Yurub Baan ka Gacan Haadiyaa Markaan Guurawee!”Qaybtii 3aad…Maxamed Siciid Gees, London, UK.
“Go’aanka Maxkamadda Adduunku ka soo saartay qaddiyadda Kosovo, mid Somaliland ah ayaa ka horreyn lahayd haddii hore loo sii wada lahaa arrintii adeegsiga garyaqaannada lala heshiiyey”
Mr. Alex Salmond waa siyaasi ay ahayd inay yaqaaniin, siyaasiinta iyo mufakariinta iyo suxufiyiinta Somaliland, haseyeeshee waxa ayaan-darro ah ilaa ay ka eegaan internet-ka ma garanayaan. Ninkan waa wasiirka kowaad ee Dawlad-gobaleedka Scotland, waa isla madax xisbiga Scottish National Party. Xisbigaas oo ku guulaystay aqlibiyaddii Baarlamanka Scotland doorashadii u dambaysay.
Xisbigaas oo muddo ku siman ilaa 1934kii u ololaynayey in Scotland ka go’do Boqortooyada Midowday (United Kingdom). Sannadkii hore ayey dawladaha Scotland iyo dawladda Boqortooyada Midowday ku heshiiyeeyn afar qodob oo ka hadlaya in sannadka 2014 afti laga qaado dadka reer Scotland oo aayahooda ka tashadaaan si dimoqraadi ah inay ugu go’aan Boqortooyada Midowday oo ay goonni isu taagaan iyo inay ku jiraan. Waxa xiise badan leh xeerka aftida waxa dejinaya Golaha Wakiillada ee Scotland, kaas oo ka mid ah qodobada lagu heshiiyey.
Hadda waa tan la goostay in loo wada hadlo, dawladda Soomaaliya iyo dawladda Somaliland ilaa intee ayey ka war hayaan siyaasiyiinta Somaliland muxaafid iyo mucaaridba arrimahaas, waxay madaxda Somaliland, xukuumad, wasiirro, xildhibaanno, madax axsaab ugu socod badan yihiin Boqortooyada Midowday intaas ay gala baxayaan, weli cidna ma isku dayday inay xidhiidh la samayso amma aqoon ka raadsato dwaladda Scotland iyo xisbigeeda. Waxa waqtigu kaga lumaa intay dhex taagaan yihiin masaakiinta qaxootiga ah.
Waa aan la socday wefti Somaliland oo la kulmay Wasiirkii Kowaad ee Ethiopia Meles Zinaw ayaan wadahadalkii ku daray in aannu qaddiyadda Somaliland geynayno Maxkamadda Adduunka ee Hague. Wixii hadal aannu lahayn arrintaas ayaa dubuqtiri oo uu xiiseeyey waxa uu yidhi; “Waxaan idinku taageerayaa sharciyaqaan reer Ethiopia ah oo aad ugu takhasusay xeerka caalamiga ah oo hadda Jineefa jooga oo nagala taliya xuduudaha iyo sharciyada caalamka.” Uma aan sheegin in aannu heshiish afgarad markaas kula jirno shirkad garyaqaanno Ingiriis ah.
Markii Maxaakiimtu qabsatay Muqdisho, ayaa dawladda Ethiopia ruxantay oo waxay doontay in Maraykan ku ku taageero dulimaad lagu qaado maxaakiimta, dabadeed waxa ila soo xidhiidhay xafiiska Ethiopia ku leedahay Hargeysa ninkii haystay Abdette Dirirbasa oo i waydiiyay warbixin Garyaqaanka dawaladda South Africa ka diyaariyey qaddiyadda Somaliland, una diyaariyey Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dawladda South Africa waqtigaasi Mrs Zuma, iyada oo hadda ah Xoghayaha Ururka Midowga Africa (AU).
Qoraalkaas si oo cad u tilmaamayey inay Somaliland xaq u leedahay in la aqoonsado; waxay gabbood iyo qiil uga dhiganayeen ictiraafka Somaliland, kaas oo ay ku xodxodanayeen dawladda Maraykanka.
Go’aanka Maxkamadda Adduunku ka soo saartay qaddiyadda Kosovo, mid Somaliland ah ayaa ka horreyn lahayd haddii hore loo sii wada lahaa arrintiin adeegsiga garyaqaannada lala heshiiyey.
Si kasta ha ahaatee, waxa nuxurka go’anka Maxkamadda Caalimiga uu yahay. “Self-determination does not contradict international Law ’’ amma ayaa-ka-tashigu kama horimanayo amma burinayo sharciga caalimiga ah ee dalalku ku wada dhaqmaan, taasoo looga jeedo haddii Somaliland ay ayaa-ka-talin ku heshiiyaan Soomaaliya ay ka qabsoonto waa la ictiraafi karaa.
Haddaba, Cameron iyo Haig ma loo sheegay haddii ay Scotland oo 300 ka mid ahayd Boqortooyada Midowday u oggolaadeen ayaa-ka-talin, maxay ka qabaan ayaa-ka-talinta Somaliland? Waxa dadka Scottish ah sheegaan xubnihii saxeexay midowga (1707), waxa Ingiriisku kaga iibsaday saxeexa dahab. Somaliland waxa dadweynaheedu odhan jireen oo ku kaftami jireen, odayaashii saxeexay midowga (1960) waxa laga iibsaday saxeexa muus!.